Antontanisa momba ny fanafohezana URL an'ny bogus an'i Google | Martech Zone
Nanana fotoam-pahavitrihana nahaliana tamina mpanjifa izahay Analytics fanofanana sy fifampidinihana ataonay miaraka amin'ny orinasan-dry zareo. Ao anatin'ny ezak'izy ireo mitohy, mizara QR Codes izy ireo, manampy ny kaody fampielezan-kevitra Google Analytics, avy eo mampihatra ny Mpanafoana URL Google, mamela azy ireo araka ny marina mandrefy ny tahan'ny valin'ny ezaka ataon'izy ireo.
Paikady hentitra io. Ny Analytics irery ihany dia tsy afaka manome anao izay rehetra ilainao noho ny rindranasa rehetra izay manaparitaka rohy ankehitriny izay tsy mampiditra angon-drakitra momba ny fangatahana. Fantatr'i Analytics hoe avy aiza ianao avy amin'ny mpizara tranonkala milaza amin'ny pejy manaraka hoe aiza ny pejy farany niaraka tamin'ny fampahalalana rehetra momba ny mpanjifa. Satria tsy manana mpizara tranonkala ny fampiharana… tsy mandalo angona izy ireo. Vokatr'izany dia te hampiditra kaody fampielezankevitra ianao amin'ny URL fohy kokoa alohan'ny fizarana azy ireo. Vao nampiseho ny fomba hanampiana izahay Fanarahana ny kaody fanentanana Google Analytics miaraka amin'nyHootsuite vao haingana.
Na izany aza, nahita zavatra manaitra kokoa izy… hitany fa nisy tsindry niseho teo amin'i Google talohan'ny nahariana ny rohy! Ity misy porofo - mivantana ao amin'ny motera fanaovana tatitra Goo.gl:
Ary tsy indray mandeha no nitrangan'izany… manerana ny toerana rehetra!
Mampalahelo fa tsy azo ianteherana izany angona izany… fa tsy azo atao tsotra izao. Amin'ny alàlan'ny interface dia tsy afaka misafidy elanelam-potoana ianao, koa tsy maintsy manintona ny totozy azy amin'ny alàlan'ny tabilao i Kevin mba hanangonana daty sy tsindry hamenoana ny tatitra nataony. Gaga aho fa tsy ampidirin'i Google fotsiny ao amin'ny Analytics ny fanafohezan'izy ireo ary alefa lisitra ho azy ny fanentanana. Gaga kokoa aho, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hikarohanay ny zava-bitan'ny tranokalanay, inona no mahadiso ity hadisoana ity!
Misy mahalala mpitantana ny vokatra ao amin'ny Goo.gl afaka manazava izany?
Tags: goo.glgoogle url hanafohezanatatitrampanafoana url
May 1, 2016 ao amin'ny 5: 35 PM
Izaho dia manana olana mitovy amin'izany raha mbola nanandrana nandrefy ny fiantraikan'ny fantsona sasany aho. Nojereko ireo lohahevitra ireo tamin'ny alàlan'ny vondrona Google sy ireo forum ary bilaogy hafa saingy tsy nahita zavatra mahasoa aho.